अभिनेत्री सुरक्षा पन्तलाई ७ प्रश्‍न
चमकधमकभन्दा परको चरित्र रुचाउँछिन्, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त । उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म आमामा पन्त नि:सन्तान आमाको भूमिकामा छिन् ।
फिल्मकै लागि कपाल खौरिने कुराले असहज भएन ?
सबै कलाकारको सल्लाहमा एक दर्जनचोटि स्क्रिप्ट परिमार्जन गर्‍यौँ । मैले गर्ने चरित्रका लागि कपाल खौरनैपथ्र्यो । खौरिएँ । खौरिँदाको घटना सम्झँदा अचम्म लाग्छ । मुडुलो सिनको सुटिङ सिन्धुलीमा थियो । त्यहाँ पुगेपछि ब्लेडले मेरो कपाल नै काटेन । त्यही बेला एक जना बूढा मानिस आइपुगे र म काटिदिन्छु भने । उनले त्यही पत्तीले स्वारस्वार काटिदिँदा सबै अचम्मित भयौँ ।
तपाईं ग्ल्यामरभन्दा क्यारेक्टर बेस्ड फिल्म किन छान्नुहुन्छ ?
नाच्‍ने–गाउने, ग्ल्यामर पनि ‘क्यारेक्टर’ नै हो । भोलि यस्तो भूमिका आए क्यारेक्टरमै ढालेर अभिनय गर्छु । हरेक सिनेमामा ‘क्यारेक्टर’ हुन्छ ।
क्यारेक्टरमा ढाल्ने भन्नाले ?
अभिनय गर्नेले त्यसलाई कसरी क्यारेक्टरमा बदल्छ भन्‍ने महत्त्वपूर्ण हो । अभिनय गर्दा क्यारेक्टरको मनोवैज्ञानिक पक्ष देखिन सक्नुपर्छ । स्क्रिप्ट फितलो भयो भने क्यारेक्टरमा ढाल्न मुस्किल पर्छ । व्यक्तिको प्रसिद्धिलाई मात्र ‘क्यास’ गर्न स्क्रिप्ट लेख्दा क्यारेक्टर कमजोर हुन्छ ।
नेपाली फिल्मको समस्या स्क्रिप्टमै हो ?
पहिले स्क्रिप्टका आधारमा क्यारेक्टर कस्तो हुने भन्‍ने छुट्टिन्छ । फिल्मलाई आर्ट र कमर्सियल भनेर छुट्याउनु नै गलत हो । हरेक फिल्ममा क्यारेक्टर हुन्छ भन्‍ने सोचेरै स्क्रिप्ट तयार हुनुपर्‍यो ।
फिल्म क्षेत्रका विसंगतिबारे बोल्दा फिल्म नपाउने डर हुँदैन ?
धेरै बोल्यो भने गाह्रो त हुन्छ । म फिल्म क्षेत्रमा आउनुको उद्देश्यलाई न्याय गर्न पनि मैले बोल्नैपर्छ । सौभाग्यवश मैले अहिलेसम्म बोलीकै कारण खाली हात बस्नु परेको छैन ।
फिल्म क्षेत्रमा आउनुको कारण ?
फिल्मको काम कथा भन्‍ने हो । नेपाली फिल्मले अहिले कथा भन्दैन र समस्या भइरहेको छ । नेपाली फिल्मले कलात्मक हिसाबले प्रगति गरोस् भन्‍ने चाहना छ । हाम्रो मौलिक कथा हाम्रै फिल्मले भन्‍ने हो । म आफ्नो देशको कथा लिएर ओस्कारमा जान चाहन्छु ।
जसरी फिल्म निर्माण भइरहेका छन्, त्यसले तपाईंको इच्छालाई ओस्कारसम्म डोर्‍याउला ?
विषयवस्तु, लगानी, प्रवर्द्धन, अभिनय सबै हिसाबले गाह्रो छ । कस्ता सिनेमा बनिरहेका छन् र बन्नुपर्ने हो भन्‍नेमा राज्यलाई मतलब छैन । फिल्म क्षेत्रमै पनि धेरै विकृति भएकाले त्यो चाहना पूरा हुन सजिलो छैन । हामी एकअर्कालाई ‘पुस’ गर्नुपर्नेमा ‘पुल’ गरिरहेका छौँ । सबैमा पैसा कमाउने होडबाजी छ । कन्टेन्ट बलियो नभएकाले फिल्म कमजोर बनिरहेका छन् ।